‘आमा’ सहित १२ चलचित्रलाई डिजिटाइजेशन गरिने « THULOPARDA.COM: Entertainment News Portal From Nepal
‘आमा’ सहित १२ चलचित्रलाई डिजिटाइजेशन गरिने
नेपाली चलचित्रले हालै ५० वर्षको लामो अवधि पार गरेको छ । २० को दशकको सुरुमै नेपाली मौलिक चलचित्र ‘आमा’ पहिलोचोटि प्रदर्शनमा आएपछि प्रारम्भ भएको नेपाली चलचित्रको यस आधा शताब्दीको यात्रामा चलचित्रलाई लिएर धेरै बहस र छलफलहरू भैसकेका छन् ।
बलिउडले केही वर्ष पहिले मात्र आफ्नो १०० वर्षको अवधि पार गरेको थियो । त्यसलगत्तै आएको नेपाली चलचित्रको यो समय नेपाली चलचित्रकर्मीहरूका लागि आफ्नो मूल्याङ्कन गर्ने एक सुवर्ण अवसर पनि हो भन्न सकिन्छ ।
यही अवसरमा नेपाल चलचित्र विकास बोर्डले पुराना नेपाली चलचित्रलाई संरक्षण र सुरक्षित गर्ने उद्देश्यले डिजिटाइजेशन तथा रेष्टोरेशन गर्ने भएको छ । बोर्डको २०७४ पुस २४ गते अध्यक्ष निकिता पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले यस्तो योजनाको निर्णय गरेको हो ।
निर्णयले सबैभन्दा पहिलो नेपाली चलचित्र ‘आमा’ सहित १२ वटा नेपाली फिल्मलाई पहिलो चरणमा डिजिटाइजेशन गर्न लागेको हो । पुराना रिल प्रविधिबाट बनेका फिल्महरू खुइलेर तथा नष्ट भएर जानसक्ने भएकोले त्यसलाई नयाँ डिजिटल प्रविधिमा रूपान्तर गरी संरक्षण गर्न लागिएको अध्यक्ष निकिताले जानकारी दिइन् ।
पुराना चलचित्रलाई डिजिटाइजेशनको प्रक्रियामा लैजान विकास बोर्डले यसअघि नै एउटा समिति बनाएको थियो । समितिले पुराना चलचित्रहरुलाई क्रमशः डिजिटाइजेशन प्रक्रियामा लैजान सिफारिस गरेको छ । डिजिटाइजेशन भएपछि सबै १६ एम्.एम्. र ३५ एम्.एम्.का चलचित्रहरु अब २ के. र ४ के. फर्म्याटमा हेर्न सकिनेछ ।
आगामी असार १६ गते चलचित्र विकास बोर्डको वार्षिकोत्सवमा नेपाली फिल्मको निर्माण, उत्पादन शुरु भएको ५० वर्ष नाघेको स्वर्णकालको उपलक्ष्यमा सप्ताव्यापी रूपमा ती चलचित्रहरूलाई फिल्म फेस्टिवलको रूपमा प्रदर्शनीसमेत गर्ने तयारी बोर्डले गरेको छ ।
पुराना चलचित्रलाई डिजिटाईजेशन गरी एकसातासम्म प्रदर्शन गर्न लागिएको अध्यक्ष निकिता पौडेलले बताइन् ।